फ्रान्सेलीहरू बारम्बार किन विद्रोह गर्न चाहन्छन् ! | रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ असार १० मंगलवार, ०७:५६
फ्रान्सेलीहरू बारम्बार किन विद्रोह गर्न चाहन्छन् !
२०७५ पुष २४ गते प्रकाशित, l १४:३१
काठमाडौं, २४ पुस । सात हप्तादेखि जारी सरकारविरोधी प्रदर्शन नरोकिएपछि फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवार फिलिपले अनधिकृत प्रदर्शनमा सहभागी हुने मानिसहरूलाई दण्डित गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
कुल २० प्रतिशत मानिसहरूले भने फ्रन्ट न्याश्नलको बाटोमा तगारो बन्नकै निम्ति र केही अन्यले भने आर्थिक सुदृढीकरणको आशामा माक्रोँलाई मत दिएका थिए।
सत्तामा आएपछि पहिलो वर्षमा सरकारले थुप्रै अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्‍यो।
अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर र नोभेम्बर महिनाको बीचतिर गरिएको एउटा विरोध अपिलमा १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूले समर्थन व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गरिएको एक महिलाले राखेको भिडियो इन्टर्नेटमा निकै चर्चित हुन पुग्यो।
त्यसमा पहिले जस्तै सबैभन्दा थोरै निवृत्तिभरण बुझ्नेहरूलाई करमा छुट दिने, गरिबहरूका लागि क्रिस्मस बोनसमा कर छुट दिने र अवसर नपाएकाहरूलाई राहत बढाउने योजना समाविष्ट थिए।
राष्ट्रपतिको घोषणामा एउटा विषय भने नयाँ थियो।
जक्रेरी समेत भनेर चिनिने किसान आन्दोलनले १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिको सम्झना दिलाउँछ।
उक्त क्रान्तिले फ्रान्समा राजतन्त्रको अन्त्य गरेको थियो । सो क्रान्तिजस्तै हालको आन्दोलनले नयाँ किसिमको अभिजात वर्ग, विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिक रूपमा कुलीन वर्गको विरोध गर्दछ।